Translation – Gniap
သူမ နာမည်က ‘Amber Yang’ ။ အာကာသပတ်လမ်းကြောင်းရှိ အမှိုက်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုပုံစံကို ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိထားခဲ့သူ။ သူမ အကြောင်း မပြောခင်မှာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဒီလို သေးငယ်လှတဲ့ အမှိုက် အတိုအစ ပြဿနာလေးတွေကနေ အာကာသစီမံကိန်းတွေရဲ့ ပြဿနာအကြီးကြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းကို အရင် ပြောပြလိုပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ Gravity ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရာကနေ Amber Yang အနေနဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု စဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုစဥ်အချိန်က ၉ တန်းကျောင်းသူ အရွယ် ၊ ဖလော်ရီဒါမှာ နေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက Read more…
MakeCode ဆိုတာ …. MakeCode ဆိုတာကိုတော့ Micro:Bit အသုံးပြုသူတိုင်း သိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ မသိသေးသူတွေအတွက် မိတ်ဆက် ပြောပြရမယ်ဆိုရင် MakeCode ဆိုတာက Microsoft က ထုတ်လုပ်တဲ့ online coding platform တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကို အလွယ်တကူ သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Platform တစ်ခုပါ။ MakeCode က MicroBit လို controller တွေနဲ့ တွဲပီး coding ရေးလို့ရသလို 2D Arcade Game Development အတွက်လဲ အသုံးချလို့ရပါတယ်။ နောက်ပီး Minecraft Edu version နဲ့လဲ တွဲပီး ရေးလို့ရပါတယ်။ Read more…
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Data Scientist / Data Analyst ဆိုတဲ့ အမည်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပေမယ့် Data Journalist / Data Journalism ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့တော့ ထိတွေ့မှု နည်းပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာ Data Journalism ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ။ Data Journalism ဆိုတာ ဘာလဲ? ဒေတာအချက်အလက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ သတင်းစာရေးအတတ်ပညာ အမျိုးအစားတခုလို့ အလွယ်တကူ ပြောလိုက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းလင်းမယ် မထင်ဘူးဗျ။ “အချက်အလက်” ဆိုတာရယ် “သတင်းစာရေးအတတ်ပညာ” ဆိုတာရယ် စကားလုံး နှစ်ခု ကိုက Read more…
BBC micro:bit ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ စိမ်းနေပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီကလဲ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား မီဒီယာကုမ္မဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ BBC ပါ။ BBC micro:bit ဆိုတာ ဘာလဲ ? BBC micro:bit ဆိုတာ အိတ်ကပ်အရွယ်အစားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ သေးသေးလေးတမျိုးပါ။ ကလေးငယ်တွေ နဲ့ စတင်လေ့လာလိုသူတွေအတွက် နည်းပညာ (Coding) ကို လွယ်ကူစွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Graphical Programming (ရုပ်ပုံတွေ အသုံးပြုပီး ရေးသားရတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဘာသာစကား) Read more…
Andrew Ng က Stanford တက္ကသိုလ် မှ Computer Science အထူးပြု ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ Stanford မှာ သူ့ရဲ့ အစောပိုင်းအချိန်တွေတုန်းက အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ရဟတ်ယာဥ်တွေ နဲ့ STAIR Project တွေမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူဟာ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး နဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာတွေမှာ Artificial Intelligence ကို အသုံးချနိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ အမေး – အဖြေ ဂဏ္ဌ ကို အောက်မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ် ။ မေး – ခဗျား အနေနဲ့ ဒီ Read more…